के दूध सेतो रगत हो ? जानौं दुधबारे अनौठा तथ्य « Sansar News
के दूध सेतो रगत हो ? जानौं दुधबारे अनौठा तथ्य
१९ श्रावण २०७८, मंगलवार १३:३७
साउन १९, काठमाडौं । दूध शाकाहारी हो वा मांसाहारी यस सम्बन्धमा बहस जारी छ । र अनुसन्धान पनि । केहि मानिस दूधलाई शाकाहारी मान्छन् भने केहि मांसाहारीअन्तर्गत मान्दछन् । यसको साथै दूधको सम्बन्धमा धेरै प्रश्नहरु निकै अनुत्तरित देखिएका छन् । जसबारे यहाँ केहि सन्दर्भ उल्लेख गर्ने प्रर्यत्न गरिएको छ ।
कतिपयले दूधलाई सेतो रगतको रुपमा पनि लिन्छन् । अधिकांश मानिसहरुले दूधलाई शाकाहारी मानिरहँदा यस्तो समुदाय पनि छ जसले दूधलाई मांसाहारी मानिरहेको छ । जुन कुरा प्राचिनकालदेखि नै बहसको रुपमा पनि चलिरहेको छ ।
यस विषयमा कयौं शोधकर्ताले पनि खोजी गरेका छन् । तर, उनीहरु दूधलाई शाकाहारी मान्ने वा मांसाहारी निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । प्रोटेस्टेन्ट ईसायीहरुले १७ औं शताब्दीदेखि दूध र दुग्धजन्य पदार्थबाट बन्ने सबै कुरालाई निषेध गर्न शुरु गरेका थिए । उनीहरु दूधलाई मांसाहारी भोजनको रुपमा लिन्छन् ।
दूध पिउँदा फाईदै फाईदा
दूधबाट दही, महि, घ्यूलगायत खाद्यपदार्थ बन्ने गर्दछ । गाईको दूध पिउन निकै फाइदाजनक पनि छ । दूधमा खनिज, चिल्लो, क्यालसिएम, राइबोक्लेविन, भिटामिन र प्रोटिन पाइन्छ । जसले मानव शरीरलाई शक्ति दिनुका साथै निरोगी बनाउन पनि मद्दत गर्दछ ।
दूधमा शरीरको लागि चाहिने पोषण तत्व भरिपूर्णं हुन्छ । दूधले शारिरिक मात्रै नभई मानिसको मानसिक विकासमा पनि निकै महत्वपूर्णं भूमिका खेलेको अध्ययनले पुष्टी गरेको छ । यूनिभर्सिटी अफ मायनेको शोधकर्ताले दूध पिउने व्यक्तिको मानसिक क्षमता अन्यको तुलनामा निकै राम्रो भएको पुष्टी गरेका थिए । उनीहरुले नियमित दूध सेवन गर्नेको दिमाग अन्यको भन्दा ५ गुणा सक्रिय हुने पनि पुष्टी गरेका थिए ।
गाईको दूध सबैभन्दा उत्तम
सोधकर्ताले सबैभन्दा उत्तम दूध गाईको हुने पनि पत्ता लगाएका छन् । शोधकर्ताका अनुसार गाईको दूध पिउने व्यक्तिको रोगप्रतिरोधक क्षमता अन्यको तुलनामा बढि भेटिएको थियो । गाईको दूधमा कम चिल्लोपन भएपनि निकै औषधीय गुणसहित हुने शोधकर्ताहरुको निष्कर्ष छ ।